TONGA ETO AN-TANY IANAO MBA HO TANTARA – Blaogin'i Voniary
Ny fiainanao, manomboka ianao vao teraka hatramin’ny andro handaozanao an’ity tany ity dia mipetraka ho tantara. Tantara ho an’izay manodidina anao, ho an’ny firenenao ary ho an’ny taranakao. Ny mpanoratra dia ianao sy Ilay mpahary anao. Mandahatra Izy, fa omeny safidy koa ianao amin’izay làlana izoranao. Manan-danja amin’ny fiainanao ny fiekenao ireo toe-javatra roa ireo mba handraisanao an-tànana ny tantaram-piainanao.
Ianao no mpilalao fototra
Raiso an-tànana ny fiainanao fa aza avela ho olon-kafa no hitondra azy. Tsy ny ray aman-dreninao, ny iray tampo aminao, ny vadinao, ny zanakao na ny sisa hafa no tompon-toerana voalohany amin’ny tantaranao fa IANAO. Izany akory tsy ilazana hoe tsy misy dikany ireo olona ireo fa ianao dia ianao ihany no TOMPON-TSAFIDY VOALOHANY amin’ny fiainanao. Mety mahafaly anao, mahasosotra anao na mandratra anao indraindray ny fihetsika ataon’izy ireo. Mety mitaiza anao, manabe anao, manefy anao na koa manimba anao ny fisiany eo amin’ny fiainanao. Na izany aza, aoka tsy ijanona ho mpilalao mpanampy ianao.
Ianao no tompon’andraikitra voalohany
Raha mety ny fiainanao dia noho ianao ary raha tsy mety dia noho ianao. Aza mitady olon-kafa homena tsiny raha sendra fitrangan-javatra tsy mifanaraka amin’izay eritreritrao. Raha tovovavy ohatra ianao, eo ihany ny haratsiam-panahin’ilay lehilahy namitaka anao fa mety ianao koa no nentanim-pitiavana lalina ka toa jamba mandeha amin’ny alina. Raha tsy tafita tamin’ny fanadinana ohatra ianao, eo ihany ny korontana nateraky ny fisarahan’ny ray aman-dreninao fa mety ianao koa no tsy niezaka nihoitra izany sy nifantoka tamin’ny fianarana. Tsarovy hatrany fa MPANAO ianao ao anatin’ny tantaranao fa TSY IHARANA.
Ny fanapahan-kevitrao handray an-tànana ny fiainanao dia efa dingana lehibe. Soraty àry ny tantaranao ary mitoera ho MPANDRESY lalandava!
développement personnel gasy, empowerment gasy, mpandresy aho, mpandresy ianao, tantaram-piainana